Tokony ho tamin’ny iray ora marainan’ity Alakamisy 02 janoary 2020 ity dia nisy fiotsahan’ny vatobe indray teny Tsimialonjafy Mahamasina, Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra. Tsy nisy ny aina nafoy fa trano hazo iray tsy nisy nipetraka no potika. Nisy ireo olona sasany voatery nifindra toerana.
Nidina teny an-toerana ny BNGRC miaraka amin’ny sefo Fokontany nijery ny toe-java-misy, sy ireo vato mbola ahiana hiotsaka, namaritra ireo toerana mampidi-doza, ary indrindra nanentana ireo mponina eo amin’ny manodidina mba hifindra toerana.
jeudi, 02 janvier 2020 22:14
Zandary namono olona teny Ivato: Hampidirina ho mpiasa eo anivon'ny Zandarimaria ilay vehivavy vady navelan'ny maty
Tonga teny amin’ny HJRA Ampefiloha, tamin’ny fotoana hakan’ny fianakaviany ny nofomangatsiakan’ilay lehilahy maty tsy tra-drano notifirin’ny zandary iray teny Ivato ny marainan’ny taombavao 1 janoary 2020, ny fianakaviamben'ny Zandarimaria notarihin'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Richard Ravalomanana sy ny Jeneraly Komandin'ny Zandarimaria, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ilay maty.
Nilaza ny Minisitra fa efa nandraisana fepetra hentitra araka ny lalàna ilay zandary nahavanon-doza. Hisy ihany koa ny fiahian'ny Zandarimaria ilay vehivavy mananontena, vady navelan'ny maty ka mety hampidirina azy ho mpiasa sivily eo anivon'ny Zandarimaria.
Nangingina tsy toy ny mahazatra ny fety fitsenana ny taona vaovao 2020 teto Toamasina.
Vokatry ny alikaola sy hamamoana anefa dia miaramila iray no vaky loha niady tany amin’ny Bar tao Mangarivotra ny alarobia vao maraina.
Tovovavy iray no namono tena, saingy avotra ihany ny ainy. Nisy lehilahy iray maty voatsatoka antsy noho ny ady tany anaty Bar tao Ankirihiry. Nisy 11 ireo olona vaky loka niady an-dalana tao anatin'ny fety.
Nosamborina ilay zandary nahavanon-doza izay nitifitra ka nahafaty lehilahy iray tao anaty toeram-pisotroana tetsy Ivato, ny marainan’ny taom-baovao 1 janoary 2020 ity.
Nanao fanamiana sivily ilay zandary, ary nitondra basy tany am-balahany. Io no notifiriny an’ilay tovolahy teo amin’ny lohany ka nahafaty azy avy hatrany.
Vao nahazo fampandrenesana an’ity loza ity ny teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena dia namoaka didy sy fahazoan-dalana fanenjehana. Andron'io ihany dia voasambotra ilay zandary nahavanon-doza ka nogiazana ny basy teny aminy. Natomboka avy hatrany ny famotorana ifotony sy arak'asa momba azy ka atolotra ny Fitsaràna aorian’izay.
Nanantitratitra ny Zandarimariam-pirenena fa « ao anatin'ny fotoam-panadiovana anatiny ankehitriny » ka "tsy mitahiry olon-dratsy".
jeudi, 02 janvier 2020 11:39
Hery Rajaonarimampianina: Manome fotoana amin’ity taona 2020 ity
Nampiasa tambazotran-tserasera ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina niarahabany ny Malagasy noho ny taona vaovao 2020, sy nanaovany jeritodika fohy ny taona 2019.
jeudi, 02 janvier 2020 11:35
Wawa: Notoloran'ireo mpikarakara azy ny Limousine
Tanteraka soamantsara ny lanonana namaranana ny taona 2019, ka niarabana ny taona vaovao 2020 tao Paris, niaraka tamin'ny mpihira fanta-daza Wawa sy ireo mpanakanto maro nanafana ny lanonana.
Nankasitraka ny fiarahana miasa efa ampolo taonany maro ireo mpikarakara, ka dia natolotra an'i Wawa ilay fiara Limousine nitondrana azy tao Paris, sady ho fanamarihana ihany koa ny tsingerin-taona nahaterahany.
Mamarana any Rennes ny zoma izao, ary manakatona ny diany nitety an'i Eoropa i Wawa sy ireo mpanakanto namany amin'ny sabotsy izao any Bordeaux, dia hiazo an'i Madagasikara amonjy ny tanindrazany izy.